Ciidammada dowladda Syria waxay sheegeen inay qabsadeen degmo 2aad oo mucaaradku haysteen ee bariga magaalada Xalab – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Ciidammada dowladda Syria waxay sheegeen inay qabsadeen degmo 2aad oo mucaaradku haysteen ee bariga magaalada Xalab
Ciidammada dowladda Syria waxay sheegeen inay qabsadeen degmo 2aad oo mucaaradku haysteen ee bariga magaalada Xalab. Hadal ayaa lagu sheegay in ciidammada iyo xulafadoodu ay si buuxda ula wareegeen degmada Jabal Badro. Saacado sii horreeyay, warar mucaaradka ayaa xaqiijiyay in laga qabsaday degmada Hanano.
Tani waa jabkii ugu weynaa ee ilaa hadda soo gaaro falaagada Xalab. Wararkuna waxay sheegayaan in boqollaal dad rayid ah ay ka carareen deegaannada mucaaradku haystaan ee bariga magaalada Xalab.
Dadka rayidka ah waxaa la sheegay inay habeenkii xalay u guureeyeen deegaannada dowladdu haysato ee galbeedka Xalab. Mucaaradka iyo dadka dhaqdhaqaaqa wada waxay sheegeen in laga qabsaday inta badan degmada Hanano.
Ciidammada Turkigu waxay sheegeen in 22 mucaad ah oo ku sugnaa woqooyiga Syria uu ku dhacay gantaal kiimiko ah oo ay sheegeen inay soo rideen dagaallamayaal kooxda sheegata Dowladda Islaamka.
Wakaaladda wararka ee Anatolia oo dowladdu maamusho waxay sheegtay iyadoo ciidammada soo xiganaysa in weerarka gaaska ee lagu soo qaaday jabhad uu Turkigu taageero uu ka dhacay meel u dhow tuulada Khaliliya, laakiin ma sheegin goorta weerarku dhacay.
Previous: Gudaha Dalka Ugandha Ayaa Dowlad Cusub Looga Dhawaaqay
Next: DEG DEG: Doorashada Aqalka Hoose ee Cadado Maanta Masuul Culus uu ku guuleestay+Magaciisa